Mandroso haingana ny fananganana ny Apple Apple Store Walnut Creek | Avy amin'ny mac aho
Ilay Apple Store mahatalanjona izay apetrak'i Apple ao Walnut Creek dia mandroso haingana ary antenaina hisokatra amin'ny fahavaratra manaraka, araka ny sary hitantsika amin'ny sary. Ny fivarotana distrikan'i Broadway Plaza any Walnut Creek no iray amin'ireo maoderina sy manavao indrindra amin'ity 2018 ity.
Azontsika jerena ny sary nalaina tamin'ny mpaka sary Thomas brighbill fa vita ny firafitry ny trano, ary koa ny tafo mitafo. Ireo mpandraharaha dia manao famitana hafa ny ampahan'ny tranobe sy ny manodidina ny vala. Ny seta dia miteraka fitoviana amin'ny fisokafana farany an'ny Apple Store.
Io no fanokafana Apple Store faharoa any Walnut Creek, Saingy ny fivarotana voalohany dia nisokatra tamin'ny taona 2003. Saingy ity magazay ity dia mbola namboarina niaraka tamin'ny firafitra Apple Store mahazatra ary tsy voaray ny fanavaozana Apple Store izay nanomboka tamin'ny taona 2015. Toa miandry ny fisokafan'ity magazay vaovao ity i Apple hanombanana ireo hetsika hotanterahina amin'ny fananganana voalohany ny mponina.
Ny ivontoerana fiantsenana misy ity trano vaovao ity, Broadway Plaza, dia amboarina tanteraka. Ity ivon-toerana izay feno 60 taona tamin'ny 2011 ity dia manana ny mampiavaka azy ho iray amin'ireo ivontoerana fiantsenana an-kalamanjana indrindra any Etazonia. Ny tompon-trano dia nanambola 250 tapitrisa tamin'ny fanamboarana, izay natao tamin'ny dingana telo.
Mahatonga ny fidiran'ny orinasan-teknolojia ho any afovoany io fanovana sary io. Tesla sy Amazon dia nanomboka ny asany hatramin'ny fanavaozana. Ny toerana nofidian'i Apple dia orinasa hotely mandraka ankehitriny.
Momba ny angona fantatsika momba ny fivarotana Apple ho avy, fantatsika fa hanana fampirantiana fitaratra mahatalanjona izy io, hatrany amin'ny valindrihana ka hatrany amin'ny gorodona. Ny tafo dia hisy alimina fisaka, somary mirona, mitady tsy fanarahan-dalàna amin'ny endriny ary misy zorony boribory. Mitovy endrika amin'ny endriny mahazatra amin'ny fivarotana Michigan Avenue sy ny Apple Park Visitor Center izy io. Ny faritra ivelany dia hanana zavamaniry, azo antoka fa miaraka amin'ireo hazo manome alokaloka an'ilay trano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Mandroso haingana ny fanamboarana ny Apple Store Walnut Creek